Malunga nesinye kwisithathu sabamkeli bathe ezona ndlela zabo zibalulekileyo zokuqokelela idatha kwiminyaka emibini ukusukela ngoku iya kuba yingqokelela yedatha nje nangona isibini kwisithathu singenzi nanye into namhlanje. Isibini kwisithathu seenkampani zophando zentengiso azilindelanga ukuba zenze ingqokelela yedatha nje kwiminyaka emibini.
Ukuze abathengisi bayeke ukuphazamisa kwaye baqale ukwabelana ngokubaluleka, nokuba kuceliwe, kubathengi, abathengisi kufuneka bafake idatha. Idatha kufuneka ichaneke ngokungaqhelekanga kwaye ifumaneke ngexesha lokwenyani. Ukuchaneka kubonelelwa ngokuqinisekisa idatha ukusuka kwimithombo eliqela. Ixesha lokwenyani alizukwenzeka ngophando okanye ngamaqela esithathu… kufuneka yenzeke ngaxeshanye nokuziphatha kwabathengi.
Uloyiko lwam kukuba, ngaphandle kokuqokelelwa kwedatha, iindonga ziqala ukunyuka. Amashishini awayi kufuna ukubeka umxholo wasimahla, izixhobo kunye neeapps ukonyusa amava abathengi kuba abanakho ukubhikica nayiphi na idatha enokusebenziseka kuyo. Ngaba ngenene sifuna ukuya kwelo cala? Andiqinisekanga ukuba siyakwenza… kodwa andikabeki tyala kwinkcaso.